Qaabka loo cusbooneysiiyo qaabka 4.1 oo leh astaan ​​cusub, astaamo iyo waxyaabo badan | Abuurista khadka tooska ah
In kasta oo aan wajaheyno kororka Adobe XD, Sketch wali waa codsi gaar ah oo loogu talagalay naqshadeynta barnaamijka iyo bogga, iyo dhammaan qaybaha ka kooban iyaga. Taasi waa sababta kooxda ka dambeysa horumarinteeda ay u sii wadaan inay si adag u shaqeeyaan si ay u keenaan cusbooneysiin.
Nooca 4.1 ayaa la sii daayay maalmo ka hor oo ka mid ah sheekooyinka cusub, sida astaamaha cusub, waa maxay noqon laheyd a interface dib loo rogay iyo qaabeynta mar kale ka icon. Cusbooneysiintaani waa u bilaash kuwa leh arjiga, oo hadda ku kacaya .94,45 XNUMX.
Isbedelka ugu muuqda waa astaanta barnaamijka. Horaa loo oran karaa macsalaameyn dheemankaas oo leh gradients fara badan waafaqsanaanta waxa noqon kara mugga dhagaxaas qaaliga ah ee qiimaha sare loo adeegsaday sida cunsurka ugu caansan marka la xasuusto codsigan. Hadda astaanta waxay u socotaa midabadaas fidsan, kuwaas oo ah ereyga loogu talagalay inta badan astaamaha iyo astaamaha adeegyo iyo barnaamijyo kale oo badan.
Shahaadiyaasha ayaa sidoo kale laga saaray astaamaha barnaamijka, iskuna amaahiyaan inay haystaan luqad naqshad badan in lala socdo gacanta naqshadeynta astaanta. Bohemian Coding, oo ah mid ka mid ah horumariyeyaasha 'Sketch', ayaa sheegay in muuqaalkan fidsan loo gudbin doono qaybaha kale ee barnaamijka iyo aqoonsiga Sketch bilaha soo socda.
Ilaa cusbooneysiintan, tusaale kasta oo astaan ​​dukumiinti ah, waad awoodi kartaa tirtir qoraalka iyo sawirada sidii loo badalay. Sketch 4.1, waxaad sidoo kale ku sixi kartaa wax kasta oo astaamaha ah, illaa iyo inta ay isku cabir yihiin, taas oo kuu oggolaaneysa inaad ku beddesho nooca "off" ee badhanka leh nooca la hagaajiyay
Horumarinta kale waa awooda lagu ilaaliyo feylasha iyada oo loo marayo Sketch Cloud, oo ah ikhtiyaar ku cusub liiska "Ku dhaji qaabka" Marka aad rabto inaad qoraalka hodanka ah ku dhajiso barnaamijka, qaababka, ikhtiyaarrada iswaafajinta toosan iyo toosan iyo noocyo wanaagsan oo cayayaanno ah ayaa la horumariyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Sawirka 4.1 wuxuu keenayaa isdhexgal dib-u-habeyn ah barnaamijkan naqshadeynta dhijitaalka ah
Wabi ka kooban 10.000 oo buug ayaa buuxiyay jidadka magaalada Toronto